GENERAL ENGLISH COURSES – SLD EDUCATION
Course Category: GENERAL ENGLISH COURSES
These English courses foster Reading, Writing, Speaking, and Listening skills with strong Grammar and pronunciation foundations in students. We use the most effective CELTA’s communicative teaching methods and each level is carefully designed to exceed CEFR’s standard. This course is good for both students and young professionals as it would teach them communication skills foranumber of areas of life.
သင်တန်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို အပြောပိုင်း၊ အရေးပိုင်း၊ အဖတ်ပိုင်း၊ နာထောင်နားလည်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေအပြင်သဒ္ဒါနှင့် အသံထွက်တွေကိုပါ အခြေခံကျကျသင်ပေးပါသည်။ English
သင်တဲ့နေရာမှာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ CELTAရဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသင်ရတဲ့ Communicative
သင်နည်းသုံးထားပြီး၊ level တစ်ခုတိုင်းကို CEFR standard ကို အလွယ်တကူယှဉ်နိုင် ကျော်နိုင်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါသည်။ ဒီCourseက နေရာတိုင်းမှာ communication လုပ်နိုင်ဖို့ သင်ပေးသည့်အတွက် ကျောင်းသားဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်နေသူအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင့်လျော်ပါသည်။
Offered Courses (တက်ရောက်နိုင်သော Level များ)
* Advanced (ကျွမ်းကျင်ဆင့်)
This course is good for students who have some grammar and vocabulary knowledge but have never used in speaking or writing. Myanmar students, especially those who have passed Matriculation exams, already have some basic knowledge in English. ဒီ Courseကတော့ English အခြေခံ Read More …
Elementary Online Course(4skills+ Grammar, Vocabulary & Pronunciation) This Course is for students who already can communicate in basic level and who still need to build up accuracy more. ဤ Elementary course ကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့် 1.ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောစာပိုဒ်ကလေးများ၊ ပုံပြင်လေးများ ကို ဖတ်နိုင်လာမည်။ 2. ရိုးရှင်းသောစကားစုလေးများနှင့်ဝေါဟာရများကို Read More …
🖊 Pre Intermediate 1 Online Course(4skills+ Grammar, Vocabulary & Pronunciation)🖌️ 🙋 အခြေခံ Grammar နှင့် ဝေါဟာရတို့ကိုသိနားလည်သော်လည်း စကားပြောဆိုရာတွင်လည်းကောင်း၊ချရေးရာတွင်လည်းကောင်းခက်ခဲနေသူများအား Pre intermediate (B1) Independent user အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်လေ့ကျင့် ပေးပါမည်။ 📖 Pre- Intermediate I Course ကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်……. 1. Pre- Intermediate level နဲ့ညီမျှသော စာအုပ်လေးများဖတ်နိုင်လာမည်။ 2. Read More …
Pre Intermediate II Online Course(4skills+ Grammar, Vocabulary & Pronunciation) Grammar မှန်ကန်စွာဖြင့် Speaking ပိုမိုသွက်လက်စွာ‌ပြောဆိုလိုသူများ၊ IELTS, TOEFL, TOEIC ဖြေဆိုဖို့ အခြေခံ ပြင်ဆင်‌နေသူများ အား Pre intermediate (B1) Independent user အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်လေ့ကျင့် ပေးပါမည်။ Pre- Intermediate II Course ကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်……. 1. Pre- Intermediate level Read More …
Intermediate I Online Course နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများ၊ IELTS၊ TOEFL ‌ဖြေဆိုရန် Listening၊ Speaking တိုးတက်လိုသူများ၊ Academic Foundation skills တိုးတက်လို သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ Intermediate I Course ကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်…. 1. ဆောင်းပါးရှည်များ၊ဝတ္ထုရှည်များဖတ်နိုင်လာမည်။ 2. Speech ၊ Presentation၊ Discussion များအားနားလည်ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်လာမည်။ 3. Report၊ Review ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရေးသားနိုင်လာမည်။ 4. အဆင့်မြင့်သဒ္ဒါများကို Speaking, Writing တို့တွင်လက်တွေ့ အသုံးပြုတက်လာမည်။ 5. Read More …
📖 Intermediate II Course ကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်…. 1. ဆောင်းပါးရှည်များ၊ဝတ္ထုရှည်များဖတ်နိုင်လာမည်။ 2. Speech၊Presentation၊Discussion များအားနားလည်ဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်လာမည်။ 3. Report၊ Review ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရေးသားနိုင်လာမည်။ 4. အဆင့်မြင့်သဒ္ဒါများကို Speaking, Writing တို့တွင်လက်တွေ့ အသုံးပြုတက်လာမည်။ 5. အသံထွက်ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာ ထွက်တက်လာမည်။ 📖 ( 48 hours Face to Face teaching+120 hours self-study package and FREE ACCESS to Audio and Read More …
👉 English စာ General ပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီး၊ Academic English အတွက်ပြင်ဆင်လိုသူများ 👉နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများ 👉IELTS၊TOEFL စာမေးပွဲအတွက် အမှတ်ကောင်းကောင်းရလိုသူများ အတွက်အထူးသင့် ‌လျော်ပါသည်။ 📖 Upper Intermediate Course အား တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်…. 1. ဆောင်းပါးရှည်များ၊ဝတ္ထုရှည်များဖတ်နိုင်၊ သုံးသပ်နိုင်လာမည်။ 2.Academic Discussionများ၊ Speech များ နှင့် Debate များအား ပါ၀င်ဆွေးနွေး တင်ပြနိုင်လာမည်။ 3. Academic Lecture များ နဲ့ Presentation များအား Read More …